Isivivinyo Sisease Test
I-Malaria pf / pan i-test-line test kit
Ukuhlaziywa Kwezinto Zokuhlwaya
Cassete / Strip
Ukuhlolwa kwe-Malaria antigen pf okusheshayo kuyinto ye-immunochromatography esekelwe ekuhlolweni kokuxilonga kwe-in vitro eyodwa ekutholeni ukuzinza kwe-Pf / pan esegazini lomuntu wonke njengendlela yokusiza ekuxilongeni ukutheleleka kwe-Malaria.
Umalaleveva ubangelwa yisinambuzane esibizwa ngokuthi yiPlasmodium, esidluliswa ngokulunywa omiyane abanegciwane.Inthehumanbody, theparasitesmultiplyintheliver, kanye ne-keinfectredbloodcell. Izimpawu zomalaleveva zifaka phakathi umkhuhlane, ikhanda, nokugabha, futhi kuvame ukuvela phakathi kwezinsuku eziyi-10 nezingu-15 ngemuva kokulunywa umiyane. Uma lungalashwa, umalaleveva ungaba usongo ngokuphila ngokuphazamisa ukunikezwa kwegazi ezithweni ezibalulekile. Ezingxenyeni eziningi zomhlaba, izimuncagazi ziye zaba namandla emithi eminingana yomalaleveva.
Vumela isivivinyo, isampula, i-buffer kanye / noma izilawuli ukufinyelela izinga lokushisa lamagumbi 15-30 ℃ (59-86 ℉) ngaphambi kokuhlolwa.
1. Letha isikhwama sokushisa egumbini ngaphambi kokuyivula. Susa insiza yokuhlola esikhwameni esivalwe uphawu bese uyisebenzisa ngokushesha okukhulu.
2. Faka insiza yokuhlola endaweni ehlanzekile nenamazinga.
3. Okokubonwa kwe-serum noma kwe-plasma: Bamba i-dropper ngokuthe nkqo isibali sesikhathi. Bheka umfanekiso ngezansi.
4. Okokubonwa kwegazi eliphelele: Bamba i-dropper ngokuthe nkqo
5. Lindela ukuthi kuvele imigqa enemibala. Funda imiphumela ngemizuzu engu-15. Ungahumushi umphumela ngemuva kwemizuzu engama-20.
Ukufaka inani elanele lokulinganisa kubalulekile emiphumeleni yokuhlola evumelekile. Uma ukufuduka (okumanzisa i -membrane) kungabukeki ewindini lokuhlola ngemuva komzuzu owodwa, engeza elinye ithonsi elilodwa lesiphudlwana (segazi eliphelele) noma i-specimen (ye-serum noma iplasma) kulokho okubonwayo kahle.
Okuhle: Kuvela imigqa emibili. Ulayini owodwa kufanele uhlale uvela esifundeni sokulawula (C), futhi omunye umugqa owodwa obonakalayo wemibala kufanele uvele esifundeni sokuhlola.
Okubi: Kuvela umugqa owodwa onemibala esifundeni esilawulayo (C) .Akukho umugqa onemibala ebonakalayo ovela esifundeni sokuhlola.
Okungalungile: Ulayini wokulawula wehluleka ukuvela. Umthamo wesampula onganele noma ayizizathu eziningi kakhulu zokwehluleka kolayini.
★ Bukeza inqubo bese uphinda isivivinyo ngedivaysi entsha yokuhlola. Uma inkinga iqhubeka, yeka ukusebenzisa ikhithi yokuhlola ngokushesha bese uthinta umsabalalisi wendawo.
Langaphambilini: I-Testsea Disease Test HCV Ab Rapid Test Kit
Okulandelayo: I-Testsea Testase Malaria Ab pf / pv Tri-line Rapid Test Kit
I-Dengue Combo Kit
iMalaria Antigen Kit
Ama-Cvs e-Rapid Chlamydia Test Cvs
I-Rapid Kit Test Ye-Hiv
Ukuhlolwa kwesifo seTestsea Chlamydia Pneumoniae Ab Ig ...
Ukuhlolwa kwe-COVID-19 IgG / IgM Antibody (Colloidal Gold)
I-Testsea Testase Dengue Test Dengue NS1 Rapid Test Kit
Canine Coronavirus Ag Test , Feline Coronavirus Test , High Sensitive Feline Coronavirus Ag Test Kit , iCanine Coronavirus Ag Rapid Test Kit , Feline Coronavirus Fcv Ag Test Kit , Feline Coronavirus Kit Kit ,